OUR brek pads - LAIZHOU SANTA BRAKE CO., LTD
N'ịbụ ndị na-eto eto na-achọsi ike site n'aka ndị ahịa breeki diski, Santa breeki guzobere ụlọ ọrụ ọhụrụ breeki na 2010. Santa breeki na-enye breeki breeki nke na-agbanwe mgbe niile iji gboo mkpa nke ahịa ụwa. diski breeki Santa na breeki bụ ihe ndị nwere ezigbo braking na-esetịpụ ụkpụrụ ọhụrụ n'ihe gbasara ịdịte aka, nkasi obi mkpọtụ, ngwa anya na nrụnye dị mfe.
breeki Santa na-emepụta breeki n'okpuru njikwa zuru oke nke usoro mmepụta, gụnyere nkwenye nhọrọ ihe na nyocha nkọwapụta na ụlọ nyocha dynamometer anyị.
Karịrị 10 ahụmịhe afọ n'ichepụta breeki na akpụkpọ ụkwụ
2010 Santa breeki mpe akwa tọrọ ntọala. Kemgbe ahụ, gbado anya naanị na breeki na akpụkpọ ụkwụ
2015 nwetara ISO 9001/ISO14001/TS16949.
2015-2020 Site n'aka ndị ahịa atọ nke USD1 nde ntụgharị kwa afọ gaa na ndị ahịa 20+ n'ụwa niile na-atụgharị kwa afọ karịa nde USD 5.
A na-eme Semi-metallics maka ịrụ ọrụ. A na-eji pasentị dị elu nke ígwè, ígwè, ọla kọpa, na ọla ndị ọzọ na-eme ka ike nkwụsị ha dịkwuo elu. Ihe mgbochi breeki nke ọkara metal na-adịte aka yana okpomoku karịa paịlị ndị ọzọ ma na-arụ ọrụ karịa oke okpomọkụ.
Ihe mgbochi seramiiki na-abụkarị nhọrọ kacha ọnụ maka ndochi. Emere site na ihe seramiiki jikọtara ya na eriri ọla kọpa, a na-emepụta paịlị seramiiki maka nkasi obi ọkwọ ụgbọ ala. Ha kacha eme mkpọtụ, na-emepụta uzuzu breeki na-adịghị mma, ma kwụsie ike karịa oke okpomọkụ. Ha na-adịkwa ogologo oge. Ihe mkpuchi seramiiki na-enyekwa pedal breeki siri ike karịa paịlị usoro ndị ọzọ. Ha anaghị arụ ọrụ nke ọma dị ka paịlị ndị ọzọ na oke oyi yana adabaghị nke ọma maka iji arụmọrụ. Mana breeki seramiiki dị jụụ, ntụsara ahụ na paịlị na-adịgide adịgide, mara mma maka ịnya ụgbọ ala kwa ụbọchị.
Ọtụtụ usoro bụ nhọrọ;
Ọnụ ọgụgụ esemokwu dị elu, obere uzuzu, obere mkpọtụ na dabara adaba maka ọnọdụ breeki dị iche iche;
Ọnụ ego na ntụsara ahụ.
2000+ nọmba akụkụ dị iche iche, nkọwapụta ihe 8+. Na-ekpuchi ụgbọ ala ndị njem na breeki na akpụkpọ ụkwụ
Teknụzụ ọgba aghara na-eduga ụlọ ọrụ
Na-emepụta nkwụsị dị jụụ, dị larịị, na-enweghị nchebe yana mbelata mkpọtụ yana sistemu breeki ndị a pụrụ ịdabere na ya
Oghere dị elu na chamfers
Nabata ịma jijiji, belata mkpọtụ wee nye uru dị oke ọnụ kwa-mile
Ụdịdị ụgbọ ala nkeonwe
Ọrụ kacha mma na ikpo ọkụ ọkụ, na-akwalite ogologo pad na ndụ rotor
Efere Nkwado Steel na-enweta ọgwụgwọ na-eguzogide corrosion
Na-eme ka efere nkwado kwụsie ike n'oge ndụ breeki ahụ dị
Ihe ngosipụta iyi nke igwe na ngwa ngwaike (ebe ọdabara)
Ọkwọ ụgbọala na-ama ọkwa mgbe ndụ pad na-eru ọgwụgwụ ya
breeki Santa nwetara Asambodo Ule site na asambodo njikọ na akara E-mark
Ruo ọtụtụ iri afọ, Santa breeki diski na pad edobela ọkọlọtọ nke kacha mma n'ahịa ahịa. A na-emepụta paịlị diski Santa ultra-premium site na teknụzụ ọgba aghara dị elu. Injinia Master rụpụtara na paịlị seramiiki na-arụ ọrụ kacha mma nke na-enye ike nkwụsị dị elu yana ike ịrụ ọrụ kacha elu.
Ike nrụpụta ụwa anyị jikọtara ya na ntinye anya na-adịghị agwụ agwụ na ịdị mma na-enyere anyị aka ịnye ngwaahịa ndị na-agbaso ụkpụrụ kachasị elu nke ịdị mma, nkenke na arụmọrụ.
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị breeki drum volvo, Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, mpe mpe akwa breeki akpaaka, Ụgbọ ala breeki, Pads breeki na-arụ ọrụ, diski breeki,